LXDE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
LXDE hazavana sy haingana izy io Tontolo iainana Desktop, toy ny XFCE y VADIKO. Amin'ny LXDE tsy dia be loatra ny fampahalalana be loatra toy ny an'ny hafa. Ohatra, ny lahatsoratra farany mamaritra momba LXDE, 1 taona mahery lasa izay, momba ny fomba fanaovana kopia backup azy io.
Azo antoka fa izany dia noho ny fisian'ny vitsy Fizarana GNU / Linux anisan'izany ny toa azy Tontolo iainana Desktop misy anao. Noho izany, amin'ity boky ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona izany? y Ahoana ny fametrahana anao?. Manasongadina, mazava ho azy, ny ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster. Izay koa no fototry ny Distro MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
"LXDE, inona no dikan'izany Tontolo iainana Desktop X11 maivana, tontolon'ny birao haingana sy maivana izy io. Natao ho namana sy maivana ho an'ny mpampiasa izy io ary mitazona ny fampiasa amin'ny loharano ho ambany. Ny LXDE dia tsy mampiasa RAM sy CPU kely kokoa, na dia birao manankarena aza. Tsy toy ny birao hafa misy fika hafa, ny LXDE dia miezaka ny modular, amin'izay ny singa tsirairay dia azo ampiasaina tsy miankina amin'ny fiankinan-doha vitsivitsy. Izany dia mahatonga ny porting LXDE amin'ny fizarana sy sehatra samihafa ho mora kokoa. ”. Wiki LXDE ofisialy
1 Ny momba an'i LXDE rehetra
Ny momba an'i LXDE rehetra
LXDE Navoaka tamin'ny ampahany tamin'ny taona 2006 avy amin'ny mpahay siansa momba ny solosaina Taiwanese Hong Jen Yee Rehefa vita PCManFM, ny maodelin'ny birao voalohany. Avy eo ny birao feno an'ny LXDE, miaraka amin'ny tanjon'ny fanompoana ny fampandrosoana ny fizarana angovo sy loharanon-karena ambany.
Handeha ho an'ny 0.8 version (stable).
LXDE misy amin'ny alàlan'ny tahiry ofisialy amin'ny maro GNU / Distros Linux, toy ny: DEBIAN, Ubuntu ary Fedora. Ary ny sasany mitondra izany amin'ny toerana misy anao rehefa mifantoka amin'ny ekipa fanjifana loharanon-karena ambany izy ireo.
El fampiharana ny tontolo iainana teratany LXDE Izy io dia misy programa maromaro, ity manaraka ity no marika famantarana na fanta-daza indrindra: PCManFM (Mpitantana rakitra), Leafpad (Tonian-dahatsoratra), GPicView (Image Viewer), ankoatry ny maro hafa.
LXDE vita amin'ny GTK + 2. Saingy manana fampandrosoana mirazotra antsoina hoe LXQT, izay horesahintsika amin'ny lahatsoratra hafa.
Izy io dia tontolon'ny Desktop fihinanana haingana sy ambany. Ny heriny dia mitoetra amin'ny famoronana ho maivana, aza mampiasa CPU sy RAM kely kokoa noho ny hafa, ary tombony amin'ny fampiasana azy amin'ny fitaovana tsy misy fampiasa.
Izy io dia mitandrina azy a vondrom-piarahamonina mpamorona iraisam-pirenena miasa amin'izao fotoana izao hihazonana ny fitoniana sy ny fahamarinan'ny Tontolo iainana na dia mahatratra ny mety fifindra-monina mankany GTK + 3.
Tonga amin'ny a interface tsara manintona fa miaraka amin'ny fomban-drazana.
Manana lafiny tsara toa ny Fanohanana amin'ny fiteny maro, famoronana hotkey mahazatra sy fiasa fanampiny toy ny fizahana rakitra ao anaty tab.
ankehitriny LXDE dia tohanan'ny Linux. Na dia efa nosedraina koa aza FreeBSD. Ka amin'ny ankapobeny dia tohanan'ny ankamaroan'ny rafitra mifototra amin'ny Unix.
Tsy miankina amin'ny birao rehetra, izany hoe ireo singa ao aminy dia azo ampiasaina tsy miankina amin'ny Desktop Environment mihitsy LXDE.
Ny endriny dia ampifanarahana amin'ny fenitra avy amin'ny freedesktop.org.
Tsy manana mpitantana varavarankely manokana izy io, saingy matetika ampiasaina amin'ny Openbox.
Ny fotony dia mbola ao GTK2 fa manana kinova andrana amin'ny LXDE miankina amin'ny GTK + 3, noforonina niaraka tamin'ny fanohanan'ny vondrona mpampiasa ny andohalambo (lxde-gtk3).
Mivoatra tanteraka izany ary tsy nahatratra ny anao kinova matotra voalohany (1.0) fa ny vondrom-piarahamoniny dia mitombo isan'andro noho ny tombony lehibe azo raisina izay tena marin-toerana.
Ampirisihina ho an'ireo mpampiasa manana traikefa avo lenta kokoa noho ny mahazatra, satria tsy dia akaiky loatra ny zava-drehetra, ary mila manery ny mety hitranga a baikon'ny Linux.
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa LXDE
Safidio ny Tontolo iainana Desktop LXDE ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny mametraka ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny LXDE mora kokoa amin'ny fanoloana ny fonosana lxde ny lxde-core.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop LXDE, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny Login Manager ldxe-session.
Ary tsarovy, ity no lahatsoratra fahadimy amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ireo teo aloha dia manodidina GNOME, KDE Plasma, XFCE, kanelina y VADIKO. Raha ny farany dia momba LXQT.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «LXDE», izay heverina ho iray amin'ireo maivana indrindra sy tsotra indrindra, toy ny XFCE, miaraka amina fomba nentin-drazana sy andiana fampiharana teratany kely sy mitohy, ao anatin'ny tontolon'ny «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LXDE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Debianita88 dia hoy izy:
Izaho dia manana Debian 10 miaraka amin'ny LXDE sy XFCE napetraka, ary sendra ahy fa ny kinova vaovaon'ny birao WPS Office 11.1.0.9080 dia tsy manomboka ao amin'ny LXDE, fa raha amin'ny XFCE dia niasa tao LXDE ilay kinova teo aloha. Misy mahalala momba an'io olana io sy ny fomba famahana azy ve?
Valiny tamin'i Debianita88